Godane oo sheegay in hooyadiis hadalkii gabtay markii gurigeeda lagu argagixiyay
Topnews :-Godane oo sheegay in hooyadiis hadalkii gabtay markii gurigeeda lagu argagixiyay
09 June 2013 Waagacusub.com-Baashe Cabdi Godane oo ay walaalo yihiin Amiirka Al-shabaab Axmed Cabdi Godane oo dhawaan waraysi siiyey Wargeyska Globe & Mail ee ka soo baxa dalka Canada sheegay in dhibaatooyin badani soo wajahaeen qoyskooda Reer Godane walaalkii Axmed dartiis.
Baashe Godane wuxuu sheegay in xukumada Somaliland xabsiga u taxaabtay laba wiil oo ay walaalo yihiin kuwaas oo xidhan muddo laba bilood ku dhawaada,ilaa haddana wax denbiya lagu soo oogin,wuxuuna labadaas wiil macagooda ku sheegay Cali iyo Mukhtaar Cabdi Godane.
Baashe Godane u sheegay wargeyska Globe $ Mail in Hooyadii oo ah qof waayeela ahi hadalkii gabtay argagax iyo naxdin ay ka qaadey hawl-gal Booliisku ku qabanayeen ama ku xidhayeen walaalkii bishii may 2013-ka
Baashe wuxuu sheegay inuu yahay Baagamuundo ,aanay jirina cid shaqaaleynaysa,wuxuuna intaas ku daray in marka qof kastaaba ogaado inay Axmed Cabdi Godane walaalo yihiin inuu shaqada u diido.
Geesta kale wasiirka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali X.Xasan oo isna wareysi siiyey wargeyska Globe ana Mail ayaa sheegay iney weli wax denbi ah ku la’ yihiin wiilasha ay xidheen ee Axmed Cabdi Godane walaala yihiin oo aan ka ahayn inay Axmed Cabdi Godane la dhasheen,wuxuuna intaas ku daray inaanay ilaa hadda u haynin wax denbi ah iyo cadaymo toona balse baadhis ku wadaan xabsigana ku hayn doonaan muddo 90 cisho.
Isku soo wada duuboo hawlgalkan lagu qabtay labadaa wiil ee Cali iyo Mukhtaar ee Axmed Cabdi Godane walaala yihiin ayaa la fuliyey ama dhacay ka dib markii Madaxweyne Siilanyo ka soo noqday safar uu muddo ku jooga dalka Maraykanka halkaas oo la sheegay inuu kulamo kula soo yeeshay saraakiil sarsare oo ka socota waaxda la dagaalanka argagaxisada iyo sirdoonka Maraykanka.